China Vial Liquid Filling Production Line na ndị na -eweta ya IVEN
Line Production Powder Production - Vial SVP
Maka mmepụta vial iko.
Ọ nwere njirimara ndị a: Vials na -ebu eriri eriri na -efe efe na -aga n'ihu; Malite site na ịgba mmiri na nhicha ultrasonic iji mee ka mmetụta nhicha dị ike. Usoro ntụgharị na aga n'ihu. sistemụ ngagharị, vials na -ejide ya na mgbachi diamond pụrụ iche.
Na -atụ aro usoro ịsa ahụ: 7 ekenyela ebe a na -asa ihe dị ka ndị a:
Ọdụ NO.1 & No.2: ịsa mmiri na -ekesa n'ime na mpụga.
Ọdụ NO.3: Ime ikuku na ikuku ikuku asepsis.
Ọdụ NO.4: iji WFI na -ehicha vials ahụ. N'ọdụ a, enwere nozzles anọ na -asa vial ahụ n'èzí.
Ọdụ NO.5: Ime ikuku na ikuku ikuku asepsis.
Ọdụ NO.6: WFI na -efesa n'ime.
Ọdụ NO.7: na -afụ ikuku asepsis na ikuku ikuku n'ime ime vial ahụ ugboro abụọ. N'otu oge ahụ, enwere afụ anọ na -afụ vial ahụ n'èzí.
Ọwara sterilization Laminar na -asọba mmiri ọgwụ asachasị ma wepụ okpomọkụ, Ọ nwere ike iru ogo kachasị elu 320 ℃, oge ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma karịa nkeji 7. (Maka 3Logs pyrogen redcution）.
O nwere mpaghara arụ ọrụ atọ (mpaghara preheat, mpaghara kpo oku, mpaghara jụrụ oyi). Ebe arụ ọrụ atọ arụnyere na efere efere nchara (elu ejiri chrome rụọ ya). A na -eji efere nchedo AISI304 nke emebere pụrụ iche.
Na -ejuputa & Na -akwụsị
Aseptic Liquid Filling Machine bụ ụdị ihe mkpuchi vial ọhụrụ mepụtara site n'ọmụmụ ngwaahịa a ma n'ime ụlọ ma na mba ofesi. O nwere ụdị teknụzụ dị iche iche dị iche iche na ntọala njikọta na ịgbatị, ọ dịkwa na usoro mmepụta.
Igwe Capping dabara maka usoro akara nke vial site na okpu aluminom. Ọ bụ ụdị igwe na-aga n'ihu, site na ikpuchi diski nwere uru nke oke ọsọ, mebiri emebi na ọdịdị mara mma.
Uru Ntanetị Mmepụta Vial Liquid
1.The kọmpat ahịrị na -achọpụta njikọ otu, ọrụ na -aga n'ihu site na ịsacha, sterilizing & ihicha, ndochi & nkwụsị, na ịcha akwa. Usoro mmepụta dum na -achọpụta ọrụ nhicha; na -echebe ngwaahịa site na mmetọ, na -ezute ọkọlọtọ mmepụta GMP.
2.Full servo akara.
3.Mkpuchi mkpuchi na-ebuli onwe ya elu nwere ọpụpụ ikuku iru mmiri, njikwa ịkpụ eletrik, dị nchebe ma dịkwa mfe mmezi.
4.N'ihi na ndị ahịa 'mmiri ọgwụ mmiri na njuputa chọrọ ziri ezi, ahọpụtara sistemu mgbapụta seramiiki, nke nwere ike hụ na njuputa zuru oke ma nwee ike gbanwee ya n'ụzọ dị mfe.
5. Ụdị nkwụsị nke ịtinye mgbe ị na -atụgharị nwere ike hụ na mmetụta nkwụsị ahụ dị nke ọma.
6.Capping capping: Enweghị Vial - Enweghị mkpuchi, enweghị nkwụsị - enweghị mkpuchi, agụụ na -etinye ngwa nchara aluminom.
Nlereanya Mmepụta akara Ogo kwesịrị ekwesị Mmepụta (kacha) Ike Nha ịbụ Oke nha
BXKZ I. CLQ 40 Mmiri dị 2.25ml 6000-12000 PC/h 69.8KW 7500Kg 9930 × 2500 × 2340mm
BXKZII CLQ 60 Mmiri dị 2.25ml 8000-18000 PC/h 85.8KW 8000Kg 10830 × 2500 × 2340mm
BXKZ III KLK 80 Mmiri dị 2.25ml 10000-24000 PC/h 123.8KW 8100Kg 10830 × 2500 × 2340mm
Nke gara aga: Agụụ Ọbara mkpokọta tube Production Line
Osote: Ampoule Na -ejuputa Mmepụta Mmepụta
Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe eji emejuola agịga, Ampoule Machine À Coudre Bernina,